အန်းဟွေးပြည်နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
တရုတ်ဘာသာဖြင့် : 安徽省
ဖျင်းယင်းဖြင့် Ānhuī Shěng
အတိုကောက်အမည်: 皖 (pinyin: Wǎn)
အမည်ရင်းမြစ် 安 ān - အန်းချင့် (Anqing)
徽 huī - ဟွေကျိုး (Huizhou)
(နှင့် အကြီးဆုံးမြို့) ဟဲဖေးမြို့
ကွန်မြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲ ကျန်းပေါင်ရွှန့်
ဧရိယာ ၁၃၉,၄၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ
- လတ္တီကျု 29° 24' to 34° 57' N
- လောင်ဂျီကျု 114° 53' to 119° 39' E
- သိပ်သည်းမှု ၅၉,၅၀၀,၅၁၀ (၈)
- လူတစ်ဦးချင်း ယွမ်ငွေ ၁.၂၂ ထရီလီယံ (US$ ၁၈၁.၁ ဘီလီယံ) (၁၄)
CNY ၁၄,၃၉၁ (၂၆)
HDI (၂၀၀၈) ၀.၇၅၀ (medium) (၂၆)
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ။
ဟွေးလူမျိုး - 0.6%
ဒေသသုံးဘာသာစကားများ တရုတ်၊ ဟွေ
ခရိုင်ကြီး(Prefecture)အဆင့် ၁၇ ခု
ခရိုင်ငယ်(County)အဆင့် ၁၀၅ ခု
မြို့နယ်(Township)အဆင့်* ၁၈၄၅ ခု
အန်းဟွေး(Ānhuī) (安徽) ပြည်နယ် သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၏ ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယန်စီမြစ် နှင့် ဟွိုင်မြစ် တို့၏ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ များဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ကျန်းစူးပြည်နယ်၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် ကျန်းရှီးပြည်နယ်၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဟူပေပြည်နယ်၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ဟဲနန်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ရှန်းတုန်းပြည်နယ် တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ ပြည်နယ် ၏ မြို့တော်မှာ ဟဲဖေးမြို့ (Hefei) ဖြစ်သည်။
အန်းဟွေးဟူသောအမည်သည် အန်းဟွေးပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော မြို့ကြီး နှစ်မြို့ ဖြစ်သည့် အန်းချင့်မြို့ (Anqing) နှင့် ဟွေကျိုးမြို့ (Huizhou) တို့၏ အမည်များကို ပေါင်းစပ်ခေါ်ဝေါ်ရာမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။  အန်းဟွေးပြည်နယ်အတွက် အတိုကောက် တရုတ်စာလုံးမှာ ဝမ် "皖" (Wǎn) ဟု ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အန်းဟွေးပြည်နယ်ဒေသသည် ရှေးယခင်က ဝမ်တိုင်းပြည်၊ ဝမ်တောင်ထွတ် နှင့် ဝမ်မြစ် တို့ တည်ရှိရာဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
ဟဲဖေးမြို့ - Hefei
အန်းချင့်မြို့ - Anqing
ဟွမ်ရှန်းမြို့ - Huangshan City
ထုံးလင်မြို့ - Tongling
မာအန်းရှန်းမြို့ - Ma'anshan
ဟွိုင်နန်မြို့ - Huainan
ပွင့်ပုမြို့ - Bengbu
ပေါ်ကျိုးမြို့ - Bozhou
အန်းဟွေးပြည်နယ်ကို ခရိုင်ကြီး (prefecture-level divisions) (၁၇)ခု ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
— ခရိုင်ကြီးများနှင့် မြို့တော်များ —
၁ ဟဲဖေးမြို့ 合肥市 Héféi Shì Luyang District 7,457,000
၂ အန်းချင့်မြို့ 安庆市 Ānqìng Shì Yingjiang District 5,311,000
၃ ပွင့်ပုမြို့ 蚌埠市 Bèngbù Shì Longzihu District 3,164,000
၄ ပေါ်ကျိုးမြို့ 亳州市 Bózhōu Shì Qiaocheng District 4,851,000
၆ ချီကျိုးမြို့ 池州市 Chízhōu Shì Guichi District 1,403,000
၇ ချူကျိုးမြို့ 滁州市 Chúzhōu Shì Langya District 3,938,000
၈ ဖူးယန်မြို့ 阜阳市 Fǔyáng Shì Yingzhou District 7,600,000
၉ ဟွိုင်းပေမြို့ 淮北市 Huáiběi Shì Lieshan District 2,114,000
၁၀ ဟွိုင်းနန်မြို့ 淮南市 Huáinán Shì Tianjia'an District 2,334,000
၁၁ ဟွမ်ရှန်းမြို့ 黄山市 Huángshān Shì Tunxi District 1,359,000
၁၂ လုအန်းမြို့ 六安市 Lù'ān Shì Jin'an District 5,612,000
၁၃ မာအန်းရှန်းမြို့ 马鞍山市 Mǎ'ānshān Shì Yushan District 2,304,000
၁၄ စုကျိုးမြို့ 宿州市 Sùzhōu Shì Yongqiao District 5,353,000
၁၅ ထုံးလင်မြို့ 铜陵市 Tónglíng Shì Tongguanshan District 724,000
၁၆ ဝူးဟူမြို့ 芜湖市 Wúhú Shì Jinghu District 3,443,000
၁၇ ရွှမ်းချင်မြို့ 宣城市 Xuānchéng Shì Xuanzhou District 2,533,000
အထက်ပါ ခရိုင်ကြီး (Prefecture) (၁၇)ခုကို ခရိုင်ငယ် (County) (၁၀၅)ခု အဖြစ် ထပ်မံခွဲခြမ်းသည်။ ၎င်းခရိုင်ငယ်များကို တစ်ဖန်ထပ်မံ၍ မြို့နယ် (Township) (၁၈၄၅)ခု ခွဲခြမ်းထားပြန်သည်။
ဟန့် ခေါ် တရုတ်လူမျိုးမှာ အများစုဖြစ်သည်။ ဟွေးလူမျိုး (Hui) နှင့် ရှဲ့လူမျိုး (She) တို့မှာ ဒုတိယ လူဦးရေအများဆုံး ဖြစ်သည်။
အန်းဟွေးပြည်နယ်သည် ကျားမဦးရေအချိုး အလွန်မြင့်မားသော ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဗြိတိသျှဆေးပညာဂျာနယ် (British Medical Journal)၏ အဆိုအရ အသက်(၁)နှစ်မှ (၄)နှစ်အရွယ် ကလေးများ၏ ကျားမဦးရေအချိုးမှာ မိန်းကလေး (၁၀၀) တွင် ယောက်ျားလေး (၁၃၈)ယောက် ဖြစ်နေသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျားမဦးရေအချိုး အမြင့်မားဆုံးပြည်နယ် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ 
ဟူကျင်ထောင်း - Hu Jintao
ကျွမ်းဇီ - Zhuang Zi
လျိုအန်း - Liu An
ကျူးယွမ်ကျန်း - Zhu Yuanzhang(Hongwu Emperor)
ဆောင်ဆောင်း - Cao Cao
လျိုမင်ချွမ်း - Liu Mingchuan
ပေါင်းကျင့် - Bao Zheng
ကျန့်ထျန်းယို - Zhan Tianyou
ချင်တုရှို့ - Chen Duxiu
ဟူရှီး - Hu Shi
ချင်နင်ယန် - Chen Ning Yang
ကျင်းကျင် - Jin Jing
ခဲ့ချင်ရှီး - Ke Qingshi
[]Anhui Agricultural University ၊ ဟဲဖေးမြို့
[]Anhui Normal University ၊ ဝူးဟူမြို့
[]Anhui University ၊ ဟဲဖေးမြို့
[]Anhui University of Finance and Economics ၊ ပွင့်ပုမြို့
[]Anhui University of Technology ၊ မာအန်းရှန်းမြို့
[]Hefei University of Technology ၊ ဟဲဖေးမြို့
[]Anhui University of Technology and Science ၊ ဝူးဟူမြို့
[]University of Science & Technology of China ၊ ဟဲဖေးမြို့
[]Anhui University of Traditional Chinese Medicine
[] Anhui University of Science & Technology ၊ ဟွိုင်းနန်မြို့
[]Wannan Medical College ၊ ဝူးဟူမြို့
[]Huainan Institute of Technology ၊ ဟွိုင်းနန်မြို့
[]Correspondence College of Computer of China
[]Chizhou University ၊ ချီကျိုးမြို့
[]Chuzhou Normal Academy ၊ ချူကျိုးမြို့
[]Anhui Sanlian College ၊ ဟဲဖေးမြို့
[]Electronic Engineering College of Hefei ၊ ဟဲဖေးမြို့
[]Huaibei Coal Industry Normal College ၊ ဟွိုင်းပေမြို့
[]Anqing Teachers College ၊ အန်းချင့်မြို့
[]Hefei Normal University ၊ ဟဲဖေးမြို့
↑ Origin of the Names of China's Provinces Archived 27 April 2016 at the Wayback Machine., People's Daily Online.
↑ China’s excess males, sex selective abortion, and one child policy: analysis of data from 2005 national intercensus survey | The BMJ
Anhui Government website Archived 25 January 2017 at the Wayback Machine.
Economic profile for Anhui Province at (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC)
Anhui Province Guide Archived 14 November 2011 at the Wayback Machine.
အန်းဟွေးပြည်နယ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် နေရာများ
ဟဲနန်ပြည်နယ် ရှန်းတုန်းပြည်နယ် ကျန်းစူးပြည်နယ်
ဟူပေပြည်နယ် ကျန်းရှီးပြည်နယ် ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အန်းဟွေးပြည်နယ်&oldid=743921" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၄:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။